भारतीय विदेश सचिवको भ्रमणले नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखिको संवादहीनता तोडिएको चर्चा भइरहँदा दुई दिनपछि हुन लागेको चिनियाँ रक्षामन्त्रीको भ्रमणलाई नेपाल–भारत सम्बन्धमा अर्थपूर्ण मानिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सीमा विवाद लगायतका समस्या वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने सन्देश पठाएका छन्।
भारतका विदेश सचिव हर्षवर्द्धन श्रृंगलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेट गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न भारतीय विदेश सचिव श्रृंगला बिहीबार साँझ बालुवाटार पुगेका थिए।
सभामुख सापकोटासँग पाकिस्तानी राजदूतको विदाई भेट
नेपालका लागि पाकिस्तानी राजदूत मजहर जावेदले प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग विदाई भेट गरेका छन्। आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरी स्वदेश फर्किन लागेका राजदूत जावेदले सभामुखको कार्यकक्ष, सिंहदरबार पुगेर सभामुख सापकोटासँग विदाई भेट गरेका हुन्।
संसदीय सुनुवाइबाट तीन राजदूतको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन
संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले सरकारले सिफारिस गरेको तीन राजदूतको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ। समितिको बिहीबारको बैठकले राजकाजी खड्का, गेहेन्द्र राजभण्डारी र तापस अधिकारीको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको हो।
बीपी किन नेहरूका प्रिय हुन सकेनन् ?
बीपी सोच्दथे, भारतीय सत्ता कहिल्यै नेपालको लोकतन्त्रको विपक्षमा हुन सक्तैन, जवाहरलाल नेहरू कहिल्यै आफू विरोधी हुन सक्तैनन् । तर, २००७ सालदेखिको उनी जीवित रहुञ्जेलसम्म भारतीय सत्ताले बीपीलाई प्रिय कहिल्यै ठानेन ।
नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधार्न ‘ट्र्याक टु’ कूटनीति भारतीय शासकको चरम हेपाहा प्रवृत्ति र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अहंकारले बिग्रिएको दुई देशबीचको सम्बन्धमा पुगेको क्षतिलाई जनता(जनताबीचको पारस्परिक विश्वास र सद्भावले पुर्न सक्छ।
के प्रधानमन्त्री भारतलाई चिढ्याउन चाहन्छन् ? भारतद्वारा अतिक्रमित भू–भाग समेटिएको नक्शा जारी भएसँगै असहज बनेको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई कूटनीतिक पहल मार्फत सहज बनाउनुपर्ने वेला प्रधानमन्त्री ओलीले भारत सरकार मात्र होइन, जनस्तरसँगकै सम्बन्ध बिगार्ने प्रयास निरन्तर गरिरहेका छन्।